ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 10. A Slight Case of Sunstroke - နေရောင်ခြည်အစွမ်း - MoeMaKa Media
Home / Arthur C. Clarke / Dr Khin Maung Win (Maths) / Science Fiction / Translation / Variety / ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 10. A Slight Case of Sunstroke - နေရောင်ခြည်အစွမ်း
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 10. A Slight Case of Sunstroke - နေရောင်ခြည်အစွမ်း
(မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၂၀
ထိုနေ့သည် ပါရီဘီယာ (Perivia) နှင့် ပင်နာဂူရာ (Panagura) ဘောလုံးအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပွဲ ဖြစ်သည်။ ပွဲကြည့်ပရိသတ် တသိန်းကျော် လာရောက်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းသည် မနှစ်က ဘောလုံးပွဲအကြောင်းကို ပြောပြသည်။ မနှစ်က ပါရီဘီယာအသင်း သည် အကြီးအကျယ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ဒိုင်လူကြီး၏ ဘက်လိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အများက ဆိုကြသည်။ ယခုနှစ်တွင်လည်း ဤနည်းအတိုင်း ဖြစ်မည်ဟု ဆိုကြသည်။
“ပါရီဘီယာအသင်းအနေနဲ့လည်း ဒိုင်လူကြီးကို လာဘ်ထိုးပေါ့ဗျာ” ဟု ကျွန်တော်က နောက် သလိုလိုနှင့် ပြောလိုက်သည်။
“ထိုးတော့ ထိုးတယ်ဗျ” ဟု ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ပြောသည်။
“ဒါပေမဲ့ ပင်နာဂူရာအသင်းကိုတော့ မလိုက်နိုင်ဘူး ထင်တယ်”
ကျွန်တော်သည် ထိုနေ့ပွဲကို သွားကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အားကစားရုံတွင် လူများ ပြည့် နေသည်။ ရဲကလည်း လူတိုင်းကို ရှာသည်။ တော်တော်ကြာကြာ ရှာသည်။ သူတို့သည် သတင်းရထားသဖြင့် လက်နက်များကို ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် ဘောလုံးပွဲစဉ် အစီအစဉ်ကတ်ပြားတခုကို ဝယ်လိုက်သည်။ ထိုကတ်ပြားလေးတွင် တောက်ပြောင်သော ငွေရောင် အဖုံးလေး ရှိသည်။
ထိုနေ့တွင် ထူးခြားချက်တခုမှာ အားကစားကွင်း၏ တဖက်ရှိ ထိုင်ခုံပေါင်း ငါးသောင်းလောက် ကို ကြိုတင်ဝယ်ထားပြီး ဖြစ်ပြီး ထိုထိုင်ခုံများတွင် ရောက်လာသူအားလုံးတွင် အစီအစဉ် ကတ်ပြားလေးများ အခမဲ့ ရရှိထားသည်ဟု သိရသည်။ ဒီထိုင်ခုံတွေနှင့် အစီအစဉ်ကတ်ပြားတွေ အတွက် ဘယ်သူ ပိုက်ဆံအကုန်ခံသလဲ။
မကြာမီ ဘောလုံးပွဲ စပါသည်။ တစ်မိနစ်လောက်အကြာတွင် ပင်နာဂူရာ ဘောလုံးသမား တယောက်က ပါရီဘီယာ ဘောလုံးသမားကို တွန်းလိုက်သည်။ ပရီဘီယာ ဘောလုံးသမား လဲကျသွားသည်။ ဒိုင်လူကြီးက ဘာမျှ မလုပ်ပါ။
ကျွန်တော် စဉ်းစားလိုက်သည်။ ပင်နာဂူရာအသင်းက ဒိုင်လူကြီးကို တော်တော်ပိုင်အောင် လုပ် ထားတာပဲ။ ဘောလုံးသမားများသည် အပြေးမြန်သလောက် ဒိုင်လူကြီးသည် နှေးသည်။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်။ နောက်တော့မှ အကြောင်းကို စဉ်းစားမိသည်။ သူသည် ကျည်ကာအင်္ကျီကို ဝတ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သတင်းတခုခု ရထားသောကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျည်ကာ အင်္ကျီကို ဝတ်ထားသောသူသည် ပြေးသည့်အခါတွင် အလွန်လေးလံသည်။ (ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်လိုက်များနှင့်လွဲလို့ပေါ့။)
ဘောလုံးပွဲသည် အေးအေးဆေးဆေး ဆက်လက်နေသည်။ ကျွန်တော်လည်း ပျင်းလာသည်။ ထို အချိန်တွင် ဘောလုံးသမား ငါးယောက် ရန်ဖြစ်ကြသည်။ လေးယောက်ကို သယ်သွားရသည်။
သိပ်မကြာမီတွင် ပင်နာဂူရာက တဂိုး ရသည်။ ပရိသတ်သည် မကျေနပ်ကြပါ။ နောက် မကြာမီ ဒိုင်လူကြီးက ပင်နာဂူရာအသင်းကို ပင်နယ်တီတဂိုး သွင်းခွင့်ပေးသည်။ နောက်ထပ် တဂိုး ထပ်ရသည်။ ပင်နာဂူရာက နှစ်ဂိုး၊ ပါရီဘီယာက သုည။
စောစောက စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး အော်ဟစ်နေသော ပွဲကြည့်ပရိသတ်များသည် ငြိမ်သက်နေသည်။ ငြိမ်သက်နေပုံမှာလည်း တော်တော်ချောက်ချားစရာကောင်းသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဒိုင်လူကြီး သည် လူမုန်းအများဆုံး လူတယောက် ဖြစ်နေသည်။
အချိန်တဝက် မရောက်မီ ပါရီဘီယာအသင်းက အလွန်လှပသော ဂိုးတခုကို သွင်းလိုက်သည်။ ဒိုင်လူကြီးက ဝီစီမှုတ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် မယုံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားသည်။ ဒိုင်လူကြီး က လူကျွံဘောဟု သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ပရိသတ်သည် အလွန်ဒေါသထွက်နေကြသည်။ ရဲများ က ဝင်၍ ထိန်းပေးရသည်။ ပွဲပြန်အစတွင် ဘောလုံးအသင်း နှစ်သင်းသည် တဖက်စီတွင် ပြန်၍ နေကြသည်။ ဒိုင်လူကြီးသည် ဘောလုံးကွင်း၏ အလယ်တွင် တဦးတည်း ရပ်နေသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့၏ မျက်နှာချင်းဆိုင် ပွဲကြည့်စင်မှ စူးရှသော ခရာသံတခုကို ကြား လိုက်ရသည်။ ထိုခရာသံကို နောက်တကြိမ် ထပ်ကြားလိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ပွဲကြည့်စင် တခုလုံးသည် အလွန်တောက်ပသော အလင်းရောင်များအောက်တွင် ပျောက်သွားသည်။ ကျွန်တော့်မျက်စိများလည်း ဘာမှ မမြင်ရလောက်အောင် စူးသွားသည်။ ပေါက်ကွဲသံတခုကို ကြားလိုက်သည်ဟု စိတ်ထဲမှာ ထင်မိသည်။
ကျွန်တော် မျက်စိမှိတ်ထားရာမှ ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ အားလုံးနီးပါးကို အရင်အတိုင်း တွေ့ရသည်။ အားလုံးနီးပါး အရင်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်မှာ ဘောလုံးကွင်း အလယ် တွင် ဒိုင်လူကြီး မရှိတော့ပါ။ ယခင်က ဒိုင်လူကြီး ရပ်နေသော နေရာတွင် မီးခိုးများ ထွက်နေ သော ပြာပုံတပုံကိုသာ တွေ့ရသည်။
ဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ သူကလည်း အံ့ဩနေပုံရ သည်။ သူသည် သူ့လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော ငွေရောင်အစီအစဉ် ကတ်ပြားလေးကို ကြည့်နေ သည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော် နားလည်သွားသည်။
နေရောင်ခြည်သည် စွမ်းအင်ပမာဏ အလွန်များသည်။ ငွေသည် နေရောင်မှ အလင်းနှင့်အပူကို ပြန်ကန်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ခရာမှုတ်လိုက်သည့်အခါ လူပေါင်း ငါးသောင်းလောက်သည် သူတို့ လက်ထဲရှိ ငွေရောင်အစီအစဉ်ကတ်များကို နေဘက်သို့ လှည့်ပြီး ဒိုင်လူကြီးတည့်တည့် အလင်း ပြန်စေသည်။
အလင်းနှင့် ပါလာသော အပူကြောင့် ဒိုငိ်လူကြီး မီးလောင်ကျွမ်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ဒိုင်လူကြီးတယောက် အစားဝင်လာသည်။ သူသည် သူ့အလုပ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ် သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ပါရီဘီယာက ၁၄ ဂိုး၊ ပင်နာဂူရာက ၂ ဂိုးဖြင့် ပွဲပြီးသွားသည်။
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 10. A Slight Case of Sunstroke - နေရောင်ခြည်အစွမ်း Reviewed by MoeMaKa on 9:00 AM Rating: 5